Ku saabsan Fushite - Zhejiang Fuhsite Silicon Co., Ltd.
Wareegyada Cagaaran ee Fushite Horumarinta Kiimikooyinka
Kooxda Fushite ZheJiangwaa soo-saare xirfadle ah oo alaabada silikon-ku-saleysan ku leh Quzhou, China. Ka dib 30 sano oo horumar ah, shirkadeena waxay ku abaalmarisay sumcad sare inay tahay soo -saare walxaha silikon ee diiradda saaraya warshadaha. Kooxda Fushite waxay ku taal Quzhou Hi-Tech Industrial Park, waxaan leenahay 3 warshadood oo wax soo saar oo waaweyn, oo leh wax soo saar sanadle ah 10000 tan oo silica qaxwada leh, 20000 tan oo silicone caag ah, iyo 20000 tan saliid silikoon ah.
Isku -darka kartida hal -abuurka leh iyo horumarka wareegtada ayaa ah qodob muhiim u ah guusha Fushite inuu hoggaamiye u noqdo dhowr warshado.
Waxaa naga go'an inaan u hoggaansanno fikradda Green Cycle oo horseedaysa isbeddellada cusub ee hal -abuurka teknolojiyadda, gaaritaanka dherer cusub xagga horumarinta sayniska.
Fushite wuxuu bilaabay soosaarka Fumed Silica intii lagu jiray 2000 -meeyadii, taas oo ah agabka aasaasiga u ah warshadaha silikon, oo ah hormuudka Shiinaha. Tan iyo markii la aasaasay, Fushite's Silica Fumed Silica waxay ku heshay koboc joogto ah iyada oo loo marayo qanacsanaanta macaamilka.
Waqtigan xaadirka ah Fushite wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro 10,000 MT/sannadkii Fumed Silica, isaga oo Fushite ka dhigaya mid ka mid ah 5 -ta ugu sareysa ee soo saarta Silica Fumed.
FST, magacayaga sumcadda silica, waa budo cawlan, caddaan ah iyo boodh. Waxa kale oo lagu gartaa cabirkeeda walxaha sub-micron, morphology spherical, aag sare oo gaar ah, daahirnimo sare iyo kiimiko dusha sare ah.
Guryahaani waxay u oggolaanayaan FST in loo isticmaalo codsiyada warshadaha kala duwan.
Walxaha kastaa wuxuu ku kala duwan yahay cabbirka 7 illaa 40 nm dhexroor, wuxuuna u dhexeeyaa 100 illaa 400 m2/g aag gaar ah oo leh BET.
Cabbirka walxaha ee silica qiiqa leh ayaa la beddeli karaa iyada oo la maareynayo xaaladaha falcelinta inta lagu jiro soo saarista ololka.
Dhumucda Iyo Thixotropy
Wuxuu bixiyaa dhumucda iyo saamaynta thixotropic ee nidaamyada dareeraha sida polyesters, epoxies, iyo resins urethane
Saamaynta ka-hortagga dejinta
Waxay hagaajisaa habdhaqanka hakinta ee hababka dareeraha ah, sida dahaarka midabka leh ama resins ay ku jiraan buuxiyeyaasha.
Waxaa lagu daraa xabagta filimada si loo yareeyo “dhejinta” .Waxay yaraysaa xiriirka dhow ee u dhexeeya lakabyada filimka
Waxay hagaajisaa sifooyinka farsamooyinka kala duwan ee elastomers -ka, oo ay ku jiraan modulus, fidinta waqtiga nasashada, xoojinta gilgilashada iyo iska caabinta jeexitaanka.
Waxaa loo isticmaalaa sidii wax lagu daro toner si loo xasiliyo sifooyinka korontada.
Waxay u adeegtaa sidii sidaha ama substrate -ka ku habboon maaddooyinka firfircoon sababta oo ah aaggeeda sare ee gaarka ah oo sarreeya iyo inertness joogitaanka dhammaan kiimikooyinka marka laga reebo alkalis adag iyo hydrofluoric acid
Iyada oo ay aad u hooseyso tabinta xaaladda adag ee gobolka iyo kala fogaanshaha baaxadda leh ee u dhexeeya qurubyada, waxay bixisaa sifooyin koronto iyo kuleyl aad u fiican
Si loo hagaajiyo sifooyinka socodka: Waxaa loo isticmaali karaa in lagu hagaajiyo xasilloonida kaydinta ee budada kuwaas oo si gaar ah ugu nugul cakeynta. Waxa kale oo loo isticmaali karaa hagaajinta sifooyinka socodka iyo ka hortagga dhibaatooyinka socodka.
Alaabta Kulul, Khariidadda bogga Amorphous Fumed Silica, Hydrophilic Fumed Silica, Aerosil 200 Silica Fumed, Aerosil Fumed Silica,